Kashifaad: Julian Draxler oo ka hadlay sababtii kahor istaagtay inuu ku biiro kooxda ugu hanashada badan | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Kashifaad: Julian Draxler oo ka hadlay sababtii kahor istaagtay inuu ku biiro kooxda ugu hanashada badan
Kashifaad: Julian Draxler oo ka hadlay sababtii kahor istaagtay inuu ku biiro kooxda ugu hanashada badan
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 2-06-16 3:04 PM Weeraryahanka kooxda Wolfsburg Julian Draxler ayaa ka dhawaajiyey inuu heshiis shaqsi ah la gaaray kooxda Juventus kahor inta uusan bilaaban xilli ciyaareedkii tagay ee 2015/2016.
Julian ayaa si layaab leh ugu soo biiray kooxda Wolfsburg xilli uu kasoo hayaamay kooxda Schalke 04, wallow ay xilligaas daneynayeen saxiixa xidigan u dhashay dalka Germany kooxo badan oo ka dhisan qaarada yurub.
22 sano jirkan ayaa hoosta ka xariiqay inuu jeclaa inuu ku biiro kooxda lagu naaneeso Marwada duqda ah, balse saacidihii ugu dambeeyey ay burbureen heshiiskii uu ugu biiri lahaa kooxda Bianconerri.
“Waxa ay ii aheyd sharaf inaan ku biiro koox sida Juventus oo kale ah, Juve waxa ay isku dayday dhowr jeer iney ila soo wareegto. aad ayaan ugu dhawaaday inaan ku biiro aniga xilligaas” Julian ayaa sidaas u sheegay La Gazzetta dello Sport.
“Waxa aan la galay heshiis shaqsi ahaaneed Juventus, balse nasiib xumo labada kooxood isma eysan fahmin, ugu dambeyn Wolfsburg ayaa dalab iisoo gudbisay iina sheegtay iney dooneyso inaan u buuxiyo booska uu baneeyey Kevin De Bruyne”.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in xidigan u dhashay dalka Germany uu kasoo muuqday kooxda Wolfsburg 34 jeer xilli uu shabaqa soo taabtay kaliya 9 jeer waa intii lagu guda jiray xilli ciyaareedka soo idlaaday ee 2015/2016.